By vijayafm on	 June 6, 2017 बिचार, विविध खबर, स्थानीय, स्थानीय तह
करुणा सागर सुबेदी
सामाजिक, नैतिक, धार्मिक, राजनीतिक आदि नियम–नियमावलीको मर्यादा वा सो मर्यादा भित्र रहने कार्य अनुशासन हो । अनुशासन वा मर्यादा पालन गराउने काम शासन हो । शासन गर्ने विधि वा तरिका शासन प्रणाली हो । जब अनुशासन र मर्यादाको लिगबाट बाहिर रहेर कसैले शासन गर्न खोज्छ, त्यहाँ दुर्घटना हुन जान्छ । विधी र विधान तोडेर खेल खेल्ने प्रयास कुनै खेलाडीले गर्छ भने आँफु त खेलबाट बाहिरिन्छ नै, उसको कारणले आफ्नो टिमले पराजय भोग्नु पर्छ । अझ क्याप्टेनले नै खेलको नियम उल्लङ्घन गर्न खोज्छ भने, झन टिम नै संकटमा पर्छ । अनि धरातल काँप्न थाल्छ । सानो तिनो कम्पनले, सु–संगठित बनाउन मद्दत पनि गर्न सक्छ । तर कम्पन रोक्न सकिएन र बढ्दै गयो भने संरचना भत्किन पनि सक्छ । यो विज्ञान, धर्म र राजनीति तिनै शास्त्रले मानेको सर्वमान्य मान्यता हो ।बुढा पाकाले भनेका छन्, बुढि मरि भन्दा नी काल पल्क्यो भन्ने डर भो । अहिले नेपालको राजनीतिमा काल पल्किन थालेको छ । यो वातावरण हामी आँफै बनाँईदै छ र त्यो भूमरीमा हामी रिङ्गी रहेका छौं ।
नेपाली कांग्रेस वि.पी. विचार र सिद्धान्तबाट सुशोभित पार्टी हो । विचार र दर्शनले कति दिर्घकालसम्म सकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण नेपाली कांग्रेस प्रतिको जनआस्था र विश्वासबाट प्रमाणित गर्दछ । यद्यपी यसको प्रयोग र नतिजा संगसंगै प्रभावकारी बनाउन सकिएन भने कालान्तरमा जनआस्था र विश्वासलाई जोगाई राख्न गा¥हो पर्छ । अहिले नेपाली कांग्रेसमा जनताको आशा र विश्वासलाई जोगाई राख्न हामी आँफैबाट सच्चिन जरुरी छ । हामी नतिजामुखि अर्थात सिद्धान्तलाई प्रयोगमा ल्याउने कार्यमा लाग्न जरुरी छ । नेपाली कांग्रेस वि.पी.को विचार र सिद्धान्तको जगमा अडिई कार्यकर्ताको अटल आस्था र विश्वासबाट धानिएको पार्टी हो । पछिल्ला दिनमा विशेष गरी ५० को दशकको पूर्वार्धबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा नेतृत्वले देखाएको व्यवहार र आचरणले काल पल्काउन शुरु भयो ।
सन्दर्भ स्थानिय तह निर्वाचन २०७४ मा गैंडाकोटको नेतृत्व र कांग्रेस प्रभाव क्षेत्र मानिने केहि वार्डहरुमा कांग्रेसको पराजयलाई लिऔं । सामाजिक सञ्जाल, सार्वजनिक स्थान, व्यक्तिगत भेटघाट÷कुराकानी, सार्वजनिक मिडीया हुँदै राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय समुदायमा गैंडाकोटको चुनावी नतिजाले सा¥है चर्चा पायो । सबैलाई अचम्मित तुल्यायो । अनेकन शंका÷आशंका र उपशंका समेत जन्मायो । बाहिर चर्चामा ल्याईएका कुराहरु प्रायः समस्यामा बढि रुमलिएको देखियो । नतिजा आई सके पछि एकले अर्कोलाई दोष, आरोप, प्रत्यारोप लगाएर आत्म सन्तुष्टि लिन खोजियो । अरुलाई चर्को स्वरमा, कडा शब्दमा, चेतावनीपूर्ण तरिकाबाट वा दिग्भ्रमित बनाएर आफ्नो दोष लुकाउने अर्थात अरुलाई दोषी बनाउने प्रयास पनि गरियो । चुनाब पश्चात करिब दुई हप्ताको बिचमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व र पकड क्षेत्रमा पराजयका कारणहरु र तर्कहरु विभिन्न दृष्टिकोणबाट सार्वजनिक पनि भए । सबै भन्दा चर्चित शब्द “अन्तरर्घात” र “अन्तरर्घाती” बने । यथार्थ सँधै तितो हुन्छ । अरुलाई दोष मात्रै लगाएर दुनिँयामा कोहि चोखो भएको पनि छैन र हुँदैन पनि । अरुलाई कुरुप देखेर आँफु कहिल्यै सुन्दर भर्इंदैन । शरिर स्वस्थ हुन आँफु भित्र रहेको फोहरलाई बाहिर फाल्नुपर्छ । आँफु भित्र रहेको विकार र गलत÷कमजोर प्रवृतिलाई बाहिर नफ्याँक्ने अनि अरुलाई दोष मात्र लगाएर चोखो हुन खोज्ने जुन प्रवृत्ति देखिएको छ, यसले पार्टीलाई झन दुषित र कमजोर बनाँउछ । आत्म आलोचना गरेर हालसम्म भए गरेका गल्ति र कमजोरी सच्चाँउदै, समस्यामा मात्र नरुमलिईकन, कसैको व्यक्तिगत टिका टिप्पणी भन्दा पनि समस्या उत्पन्न हुनुका कारण र सबालमा संबोधन गर्दै गएमा पार्टी संगठित र मजबुद हुने बलियो आधार एवं विश्वास देखिन्छ ।
किन हा¥यो त नेपाली कांग्रेस नगर नेतृत्वमा ? कांग्रेसका पकड क्षेत्रहरु किन गुमाउनु प¥यो त ?
१. साविक गैंडाकोट गाविस मात्र छँदा नेपाली कांग्रेस गाँउ कार्य समितिको पार्टी संगठन कार्य सम्पादन शैली अत्यन्त प्रभावकारी र अनुकरणिय थियो । त्यसका लागि तत्कालिन नेतृत्व र टिम धन्यवादको पात्र छ । जब गैंडाकोट, मुकुन्दपुर र अमरापुरी सहित नगरपालिका घोषणा भयो, तत् पश्चात नगर नेतृत्वले अपनाएको संगठन विस्तार र सुदृढिकरण शैली, विशेष गरी वडा र बुथ कमिटी गठन, भातृ संघ संस्थाहरुको गठन, बनेका विभागहरुको परिचालनमा आग्रह÷पूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाबाट भिन्न शैली अपनाईयो । सामुहिक संगठन विस्तारमा भन्दा पनि नगरपालिकाको भावि नेतृत्वको प्यास सिमित व्यक्तिमा जाग्यो र कार्यकर्ताहरुको माझमा सकेसम्म सबै जना नपुगुन भन्ने सोचबाट दौडिने काम भयो ।जुन महत्वकाँक्षा र प्यासले गर्दा सामुहिक नेतृत्व र जिम्मेवारी हराउँदै जान शुरु भयो ।यो सोच चुनाबको पूर्व सन्ध्यामा आईपुग्दा समेत देखिन्थ्यो । अन्ततः पार्टीले नगर नेतृत्वका लागि गजेन्द्रजीलाई चुनाब लड्न टिकट दियो । जुन निर्णय अपेक्षित थियो । यद्यपी चुनाबको मैदानमा बढ्दै जाँदा सबै आकाँक्षीहरु उत्तिकै कृयाशिल हुन सकेको देखिएन । एक आपसमा असन्तुष्टि जीवितै रह्यो, जुन कुराले नगर नेतृत्व गुमाउनुपर्यो । ।
२.पार्टीको १३ औं महाधिवेशन पूर्व संगठनमा आफ्नो बर्चश्व कायम गराउन सकृय सदस्य वितरणमा होडबाजी चल्यो । जुन कुरा केहि वार्डमा अनावश्यक रुपमा विवाद सृजना भई केन्द्रमा समेत बहसको विषय बन्यो । यसको असर केही वार्डमा स्थानिय तह निर्वाचनको नतिजा आँउदा प्रत्यक्ष देखियो ।
३. उम्मेदवार घोषणामा ढिलाई हुनु हारको प्रमुख कारण बन्यो । विपक्षी पार्टीबाट प्राय सबै वडा, नगर प्रमुख एवं उप प्रमुखको उम्मेदवारी घोषणा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता हुने मिति भन्दा केहि हप्ता अगाडी नै भयो भने नेपाली कांग्रेसका नगर प्रमुख र उप प्रमुखको उम्मेदवार छनौट केन्द्रबाट १ दिन अगाडी मात्र र वार्ड तहको उम्मेदवारको निर्णयलाई उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्ने दिन अन्तिम समयमा केहि वार्ड समिति र साथीहरुको तिब्र असन्तुष्टिका बिच मनोनयन गराईयो । थोरै समय मात्र भएकाले कार्यकर्ता र जनताको घर दैलोमा पुग्ने कार्य सतहीरुपमा मात्र भयो । वार्ड समितिबाटनै वार्ड तहको निर्णय गरेर पठाउने पूर्ण जिम्मेवारी दिई, वडा स्तरको निर्णयमा नगर र क्षेत्रले हस्तक्षेप नगर्ने अठोटका साथ अगाडी बढ्नु पर्नेमा क्षेत्रिय स्तरमा पु¥याएर, भागबण्डा र वार्ड तहको निर्णयलाई समेत उल्टाउने कार्यले गर्दा चुनाबको नतिजा प्रत्युपादक बन्यो ।
४.चुनाव प्रचार प्रसार एवं आर्थिक संकलन कार्य प्रभावकारी हुन सकेन । चुनाव प्रचार प्रसार समिति केही वार्ड स्तरमा त औपचारिकताका लागि मात्र गठन भए । पूर्ण जिम्मेवारीका साथ कृयाशिल भएनन् । उम्मेदवारहरुलाई मात्र आर्थिक भार थुप्रियो । आम कार्यकर्ता संग थोर थोरै चन्दा संकलन गरी मतदाताको माया, सद्भाव, साथ सहयोग बढाउने तर्फ ध्यान पुगेन । चुनावको टिकट हात पर्ने व्यक्तिबाट अर्थ संकलन गर्ने तर्फ ध्यान लगाईयो । उम्मेदवारहरुले मतदाताहरुलाई प्रभाव पार्न सक्ने र असन्तुष्ट व्यक्तिसँग भेटघाट गर्ने कामका लागि समय पुगेन ।
५.सम्भावित प्रतिष्पर्धीलाई निषेध गरी आँफु नेता भई रहिन्छ भन्ने राजनैतिक अदुरदर्शिता, उम्मेदवारलाई टिकट दिलाउने र जिताउने ठेक्का सिमित व्यक्तिले लिएको भान कार्यकर्तामा पर्नु, राजनीतिक भविश्य आँफु र आफ्नो चार किल्ला भित्र मात्र देख्न चाहने मनोवृत्ति, नगर र क्षेत्रिय नेतृत्वमा देखिएको कमजोर कार्यकुशलताले गर्दा असल उम्मेदवारहरु हारको शिकार हुन पुगे । त्यति मात्र भएन नेता, कार्यकर्ताहरु माझ यस खाले प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नु पर्छ भन्ने विद्रोह जन्मियो भोलीका दिनमा गरिने निर्णयहरु आत्मपरक र व्यक्तिवादी नहुन् भन्ने सन्देश दिन खोज्दा नेतृत्व नै गुम्यो ।
६. नयाँ बसाई सराई गरेर आएका व्यक्ति÷मतदाताहरुको आँकलन र उनिहरु सँगको सामिप्यतामा कमि हुनुले पनि विपक्षिहरुले जित्ने अवसर पाए । नगरपालिकाको भौगोलिक बनावट पनि यस नतिजा आउनुमा खोटपूर्ण छ । तर प्रकृति निर्मित संरचना बुझ्न मात्र सकिन्छ, यसलाई फेर्न त सकिंदैन त्यसैले यो गैंडाकोट नगरपालिकाका लागि केहि न केहि र कुनै न कुनै रुपमा असर पारिरहने दिर्घकालिन समस्या बन्ने देखियो । हिजो नवलपरासी जिल्ला सिंगो रहँदा दाउन्ने पारि र वारी भन्ने जुन समस्या थियो, त्यहि खालको समस्या गैँडाकोटमा देखियो ।
७.अहिले विश्वमा नै मतदाताहरुले नेगेटिभ भोट हाल्ने परिवेश देखिएको छ । युवाहरु र जेष्ठ नागरिकहरुको मनोविज्ञानले परिवर्तन खोजेको देखियो । लामो समय देखि नेपाली कांग्रेसले किल्ला बनाएको स्थल गैंडाकोट र नेपाली कांग्रेस भित्र युवा पुस्ताको राजनीतिमा जिम्मेवार तहमा सहभागिताको अनुपात ज्यादै कम रहेको साथै जेष्ठ नागरिकहरुलाई राज्यले प्रदान गर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ताको जस ५१ साल देखि नै कांग्रेसले भन्दा एमालेले बढि लिई रह्यो । प्रहरी महानिरिक्षकको नियुक्ति, चुनावको पूर्वसन्ध्यामा आएर प्रधानन्यायाधिशलाई महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता, सत्ता आरोहणका लागि नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र विचको चुनावि तालमेल जस्ता कारणले मतदाताहरु निरुत्साहित भए, जसको असर गैँडाकोटमा समेत पर्यो ।
लोकतन्त्रको आधारशिला भनेको निर्वाचन नै हो । एक पदका लागि धेरै जना उम्मेदवार हुने, बहुमतिय बिधीबाट नतिजा टुङ्गो लगाउने, एक पदमा धेरै जनाले हार्ने र एक जनाले मात्र जित्ने नियम भएको हुँदा, व्यक्ति वा पार्टीले हार्दै गर्दा लोकतन्त्रले चाँही जितेको हुन्छ । लोकतन्त्र सँग सँगै आफ्नो पार्टीले जित्न कांग्रेसको जिम्मेवार तहमा रहेका पार्टी नेतृत्वहरु यति बेला गैंडाकोटमा थप जिम्मेवार, उत्तरदायी र संयम हुनु पर्ने देखिन्छ । चुनावको हारका कारणहरु भनेर सार्वजनिकरुपमा जुन अभिव्यक्तिहरु र रोष प्रकट हुँदै आएका छन् । मानिस अरुलाई ढाँटे पनी आँफुलाई कदापी ढाँट्न सक्दैन । एक पटक आत्म समिक्षा गरी आँफु भित्रै आत्म विश्लेषण ग¥यो भने जो कोही पनि स्पष्ट हुने अवस्था छ । घटनाको वास्तविकता र सच्चाईमा विश्लेषण हुन जरुरी छ । गैंडाकोटमा कांग्रेसले नगर नेतृत्व हात नपार्नु क्षेत्रियता, जातियता, भूगोल आदी सवाल कदापी होइन । यी त धेरै गौण कुरा हुन । कांग्रेसले नगर प्रमुखमा हार्दै गर्दा नगर सभामा दुई तिहाई भन्दा बढि उपस्थिती कायम गरेको छ । सिङ्गो गैंडाकोट नगरीको दिर्घकालिन विकासका लागि निर्णायक हैसियत बनाएको छ । यो चुनावले कांग्रेस भित्र स्वाभाविकरुपमा जग हल्लाएको छ । गलत प्रवृत्ति पार्टी भित्र हावी हुन दिनु हुन्न भन्ने सबक सिकाएको छ । अब यसलाई पार्टीको मजबुदीकरण र शुद्धिकरणका लागि अवसरको रुपमा लिएर अगाडी बढियो भने किल्ला हल्लिएको मात्र हो उखेल्न कसैले सक्ने छैन ।